Azụ: Nnweta na tụọ njikọ ndị ọrụ na mmemme gị ọzọ | Martech Zone
FISH na-akwado ụdị, ndị na-ahazi ihe omume, na egwuregwu egwuregwu, yana sistemụ mmemme nke na-enyere nchịkọta data nke ndị na-azụ ahịa aka, na-eme ka ndị na-akwado ofufe na mmegharị ngwa ọrụ, ma na-enye ndị Fans ikike ịnakọta ọdịnaya, banye n'ọzọ, na ịkọkọrịta ahụmịhe site na mgbasa ozi mmekọrịta.
Ma ọ na-akada data collection maka marquee ihe, atụ ndị bịara omume na ụlọ ọrụ ihe ma ọ bụ nlekota n'ji njikọ aka na a ogbako, FISH nwere ike ịlele niile esenowo omume. Dishboard na-enye aka na FISH na-enye ohere ịnweta metric dị egwu, gụnyere ndebanye ndebanye ndebanye aha, ntinye ego, oge kwụ n'ahịrị, nbudata ekwentị, SME Ntinye, na ndị ọzọ.
Ikpokoro azụ azụ bụ usoro ihe omume Live Live Operating na-enye ndị na-ahazi mmemme ike ịnakọta data ndị na-azụ ahịa, ma n'otu oge na -emepụta ọnọdụ enweghị esemokwu maka ndị Fans iji tinye aka na mbido ngwa ngwa, nakọta ọdịnaya, banye na-asọ asọ, ma kesaa ahụmịhe site na mgbasa ozi mmekọrịta. Michael Gilvar, onye isi na FISH.
AKA NA-ACH Off ISHZ F AKA
Ihe ntụgharị - Nyochaa ma kọọ maka mmemme mmemme. Ndị ọrụ mmemme na ndị na-eme mkpebi nwere ohere ịnweta metric dị egwu ozugbo, gụnyere ndebanye aha, itinye aka na akụ, oge kwụ n'ahịrị, nbudata ekwentị, na ndị ọzọ.
RFID Ngwọta - Azụ na-eji ụdị RFID niile, gụnyere HF, UHF, NFC, na UWB. Ha na-eji RFID iji kwado mgbanwe-ọnụ ahịa dị n'etiti ndị na-azụ ahịa na ụdị - na-enye ndị ahịa ohere ịnakọta ọdịnaya n'ụzọ dị mfe, kesaa ahụmịhe site na mgbasa ozi mmekọrịta, wee nweta nnweta ikike - ma na-ekwe ka ika ahụ nyochaa omume ndị ahịa ma nyefee ozi nnwere onwe ozugbo.
Ndebanye aha ekwentị - nhazi usoro ndebanye aha ebe ndị fans nwere ike ịdebanye aha ma gafere kpamkpam ndebanye aha na saịtị. Mgbe onye ofufe ahụ debara aha ya, a gaghị achọrọ ha ịnakọta ebe nzere, mana kama, ha ga-enwe ike iji ngwaọrụ mkpanaka ha dịka igwe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ. Ndị Fans ga-ekekọrịta nkọwa kọntaktị ha site na mpempe akwụkwọ weebụ mkpanaka, wee gosipụta nhọrọ iji jiri eVoucher mkpanaka ha (ma ọ bụrụ na agbakwunyere na ngwa, ma ọ bụ nyefee site na SMS). Usoro ha bu agnostic teknụzụ - na-ekwe ka ngwaọrụ ahụ mepụta ụdị teknụzụ ọ bụla gụnyere BLE, QR, ma ọ bụ NFC.
Usoro Njikwa Nduzi - Azụ na-enye tupu mmemme, saịtị ma ọ bụ ndebanye aha ndebanye aha nke na-enye ohere maka ụdị iji chịkọta data ndị ọbịa nke ọma, belata ahịrị, ma kwado mgbanwe ọnụ ahịa doro anya n’etiti ndị ọbịa na ụdị. A na-etinye nyiwe data niile na sistemụ na-enweghị ntụpọ na sistemụ akuko.
Ngwaọrụ Nnọchiteanya Brand - Ndị ọrụ onsite na RFID Gụọ / Dee ike Brand Ambassador mbadamba ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaaka na-enye ụdị ohere ịdebanye ndị ọbịa, nyefee ọdịnaya, weghara foto na vidiyo, na-akwado mgbasa ozi mgbasa ozi, na ịkwanye foto ndị a ma ama na Social Media - n'ebe ọ bụla n'oge ọ bụla.
Sistemụ Njikwa Nweta - logbasapụ eriri aka RFID, VIP nweta nzere na ndị ọzọ na-arụ ọrụ ụgbọ, FISH na-enye sistemụ njikwa iji jikwaa njikwa nke ndị ọbịa na ụdị mmemme na ebe niile, gụnyere Marquee Events, Charity Events and Festivals. Usoro ha na-enye mkpesa na-eweta oge, na-enye nyocha nyocha nke arụmọrụ niile, yana ihe data gosipụtara nke ọma na azụmaahịa a.
Ngwọta Azụ ahịa Foto - AISH offers na-enye ọtụtụ ngwọta ahịa foto nke na-enyere ndị ahịa aka were foto dị iche iche nke ndị ọbịa ha nwee akara ngosi ahaziri iche ma tinye ha na Facebook, Instragram, Twitter, Micro saịtị, ma ọ bụ ozi-e ozugbo.
Mmekọrịta Social Media - Ọbịa natara kenkwukorita nyeere arụzi, dị ka wristbands, VIP gafere, isi fobs, ma ọ bụ Mobile eVouchers ka ha na-abanye ika ahụmahụ. Ndị ọbịa debanyere aha ndị ọrụ ha ma jikọta ya na akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta ha kachasị mma. Ndị ọbịa ahụ na-ejikwa teknụzụ akpaghị aka ma ọ bụ ndị nnọchi anya ika na mbadamba PC nke lelee ha ka ha rụọ ọrụ iji kwado amasị, ma tinye foto na vidiyo na akaụntụ mgbasa ozi ha na oge.
Analytics - ezigbo oge, data nwere ike ịkọwapụta nke enwere ike ịkọwa maka mkpebi n'ọdịnihu, nyocha usoro na egosipụtara ROI. Azụ na-anakọta ọ bụghị naanị data ndebanye, mana data na-enye gburugburu ma na-enye ike ime mkpebi ka mma. Ntinye data (nke a na-akpọkarị "meta data") dị ka nha nzọ ụkwụ, ihu igwe, nkwalite, ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ, wdg na-achịkọta ma nyochaa iji nyere ndị ahịa ha aka ọ bụghị naanị ịghọta nsonaazụ, kamakwa ịghọta akụkụ nke ahụmịhe na-atụnye ụtụ na ịkwọ ndị ahụ Nsonaazụ.
Towerlọ elu azụ FISH bụ ihe ngwọta pụrụ iche nke na-enwe ike ịnakọta data site na mkpado RFID. A bụ ihe nnyocha video:
Azu nwere na-adịbeghị anya partn na anyị haziri nzukọ na Postano, na-ekepụta ụdị ụzọ mbụ maka ụdị ihe eji akwado ya na ahụmịhe maka ihe omume, ebe egwuregwu na ụlọ ahịa. Mwekota ahụ na - enyere ụdị aka iji meziwanye ahụmịhe mmemme maka ndị Fans site na ijikọ ndebanye aha, njirisi, mmekọrịta mmekọrịta na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Ikpo azụ azụ na-enye ọtụtụ ụwa a ma ama ama ama na ihe omume, gụnyere US Army, US Air Force, Hyundai, Samsung, NFL, NBA na Major League Soccer.
Tags: Sistemụ nchịkwa njikwaika ngwá ọrụnchịkọta nchịkọtaihe omume ụlọ ọrụomumeihe omumeihe omume ndunjikwa ihe omumeihe ndozi ihe omumeIriIgwefụndu nduIsi Njikọ NjikọNzukọ Azụmaahịandebanye aha ekwentịNBAnflfoto ahịa azịzasistemụ ahịa ahịa fotopostanongwọta RFIDnkpado rfidSamsungmgbakwunye mgbasa ozi na-elekọta mmadụUS Force ForceAgha USomume obia
Na -eme ka imepụta email dị mma iji jide ntị nke onye na -agụ gị